अकबरे खुर्सानीले बनायो ईलामका मदनलाई करोडपति, यसरी जोडे खुर्सानी बेचेरै डेढ करोडको सम्पत्ति (भिडियो) | Rochak
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on अकबरे खुर्सानीले बनायो ईलामका मदनलाई करोडपति, यसरी जोडे खुर्सानी बेचेरै डेढ करोडको सम्पत्ति (भिडियो)
यो भिडिओमा उनले हामीसँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन् । अकबरे खुर्सानी खेती कसरी गर्ने ? यसको बजार कस्तो छ ? यो कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? मुनाफा कति हुन्छ ? लगायतका प्रश्नहरुमा उनले खुलेर जवाफ दिएका छन् । कृपया भिडिओ अन्तर्वार्ता